करौडौं ठगी गर्ने सुधीर बस्नेतलाई १० वर्ष जेल ! « Pahilo News
करौडौं ठगी गर्ने सुधीर बस्नेतलाई १० वर्ष जेल !
प्रकाशित मिति :3April, 2019 10:14 pm
काठमाडौं । ओरियन्टल सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेतलाई प्रहरीले फेरि काठमाडौंको भीमसेन गोलाबाट पक्राऊ गरेको छ । प्रहरी परिसर काठमाडौंको विशेष टोलीले बुधबार साँझ बस्नेतलाई पक्राऊ गरिएको हो ।
समस्याग्रस्त सहकारीहरुको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा बस्नेतलाई पक्राऊ गरिएको हो । बस्नेतले बचतकर्ताहरुको १४ करोड बढी हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । प्रहरीले बस्नेतमाथि संगठित अपराध र ठगी मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनले भने बस्नेतको सम्पत्ति पनि नियन्त्रणमा लिन सुझाव दिएको छ ।
बस्नेतले चार वर्षअघि सवैको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आफूसँग अर्वौको सम्पत्ति भएकाले चिन्ता नलिन पनि बस्नेतले बताएका थिए ।
११ अर्वको सम्पत्ति भएको दावी गरेका बस्नेतले चार वर्षअघिको प्रतिबद्धता पूरा गरेका थिएनन् । बरु, उल्टै बचतकर्ताहरुलाई दुख दिदै आएका थिए । भक्तपुरको गुण्डुमा दुई सय रोपनी, ललितपुरको छम्पीमा ७ सय रोपनी र मेचीदेखि महाकालीसम्म १४ सय रोपनी बराबरको जग्गा भएको बताएका थिए भने आधा दर्जन हाउजिङ र अपार्टमेन्ट भएको पनि बताएका थिए ।
जसलाई सडकमा ल्याए
बस्नेतले सयौंको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । त्यसमध्ये एक हुन्– झापाका तारादेवी ढकाल । कुनै समय काठमाडौं र झापामा काठमिलका धनी ढकाल अहिले सुधीर बस्नेतबाट पीडित छन् ।
तत्कालीन एमालेका बरिष्ठ नेताहरुसँगको सम्बन्धमा रहेका ढकालबाट सुधीरले ९ वर्षअघि अपार्टमेन्ट लिइन् । बस्नेतसँग विश्वासका भरमा । तर, अहिले ढकाल सुधीरलाई खोजी हिड्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बस्नेतलाई ढकालका साथीहरुले विनोद चौधरी जतिकै धनी भनेपछि विश्वासमा करौडौं दिदै गएकी थिइन् । ढकालका अनुसार बस्नेतले २० करोड भन्दा बढी लिएका छन् ।
अव, यसअघि समेत छुटेका सुधीरबाट पीडितहरुले न्याय पाउलान् भन्ने जिज्ञासा छ । संशोधनसहित पारित सहकारी ऐनले पनि सहकारीमार्फत् ठगी गर्नेलाई १० वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।